King Zero: November 2011
ဓမ္မစကား ခေတ်လူများ၏မှတ်စု ဂျာနယ် အမှတ်စဉ်(၂)
အောက်တိုဘာဓမ္မစကား မိမိဘ၀တိုးတက်အောင်မြင်ကြီးပွားလိုလျှင် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သော ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ စကားသုံးလုံးကို ကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်အောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုသည် ဆင်းရဲလည်းကံ၊ ချမ်းသာလည်းကံဟုဆိုကာ ဘာဖြစ်ဖြစ်ကံတစ်ခုတည်းကိုသာ ပုံချထားကြသည်မှာ လုံးဝကောင်းသောလက္ခဏာ မဟုတ်ပေ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ကံနှင့်ပါတ်သတ်၍ဟောကြားထားသည်မှာ- `စေတနာဟံ ဘိက္ခဝေ ကမ္မံဝဒါမိ´ ချစ်သားရဟန်းတို့ ကံဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး၊ စေတနာကိုပင်လျှင်ကံလို့ဟောတော်မူတယ်။ မိမိဘာလုပ်လုပ် စိတ်စေတနာကောင်းလေးနှင့်လုပ်မယ်၊ စိတ်စေတနာကောင်းလေးနှင့်ပြောမယ်၊ စိတ်စေတနာကောင်းလေးနှင့်ကြံမယ် ဆိုရင်မိမိရဲ့ကံတွေဟာကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ စိတ်စေတနာဆိုးတွေနဲ့ပြောမယ်၊လုပ်မယ်၊ကြံမယ်ဆိုရင် ကံတွေဟာအမြဲတမ်းဆိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလုပ်ငန်းပေါ်မှာ ကံရယ် ဥာဏ်ရယ် ၀ီရိယရယ် ညီမျှစွာသုံးပြီးလုပ်ပါ။ ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်ကျော်ကြားနေသူမှန်သမျှကိုကြည့်လျှင် ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယသုံးပါးကို ညီမျှစွာသုံးပြီး အစွမ်းကုန် ကြိုးစားကြကြောင်း တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားလိုလျှင် မိမိကိုယ်ကို ကံကိုလွဲချပြီး မညာပါနဲ့။ မိမိကိုယ်ကို လုံလ၊ ၀ီရိယမရှိဘဲ အပျင်းကြီးကာ ညှာမနေပါနဲ့။ မိမိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရီယသုံးပါးကို လက်ကိုင်ထားကာ မိမိချမှတ်ထားသောပန်းတိုင်သို့ မရောက်မချင်းလျှောက်မယ်၊ ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလှည့်ဘူး ဆိုသော စိတ်ဓါတ်ဖြင့်ကြိုးစားမည်ဆိုလျှင် သင့်ကို တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားကြီးပွားနေသူတစ်ယောက် အဖြစ် ကျိန်းသေမုချတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ဓမ္မစကားလက်ဆောင်ပါးရင်း…............. မင်းသုည(ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်)
Posted by dhamma at 9:33 AM0comments
ဘ၀စာစီစာကုံး ဘယ်လိုသီကုံးကြမလဲ? အပိုင်း (၁) တရားတော်
မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက်ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော ဘ၀စာစီစာကုံး ဘယ်လိုသီကုံးကြမလဲ? တရားတော် အပိုင်း (၁) အသံဖိုင်..http://www.mediafire.com/?5t7ehb8j4a8c748
Posted by dhamma at 12:08 PM0comments
Ma Su Su Nway (40): “We are struggling for human rights within the law, we do not break the law”
Activists Calling, Women Speak
Ma Su Su Nway’s Voice
Ma Su Su Nway, is 40 years old (1971) and comes from Htan Ma Naing Village, Kawhmu Township in Yangon Division. She isawell-known activist in Burma and has been actively involved in issues relating to labour rights, child soldiers and forced labour. She was arrested after she put upabanner at an international hotel, protesting against government policy. In 2007 she was sentenced to eight years in prison for treason. She was released early onagovernment amnesty in October 2011. We spoke with herafew days after her release.Ma Su Su Nway, ne kaun de la? (how are you?) And how have you been doing since your release on Wednesday 12 October 2011?
Posted by dhamma at 8:34 AM0comments
မစုစုနွေး နှင့် အင်တာဗျူး
မစုစုနွေးအင်တာဗျူးအသံဖိုင်...<a href="http://www.mediafire.com/?vlq45kqwd3xb6rt" target="_blank">http://www.mediafire.com/?vlq45kqwd3xb6rt</a>
မစုစုနွေး (၄၀)း “ဥပဒေဘောင်က လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ဥပဒေကို မချိုးဖောက်ဘဲ ရုန်းကန်နေကြဆဲ”
မစုစုနွေးသည် အသက်(၄၀)နှစ်ရှိပြီး ၁၉၇၁ ခုနစ်တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကော့မူမြို့နယ်၊ ထန်းမနိုင်ရွာ၌ ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသိများသော ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းလဲရေးရေဒီထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၊ ကလေး လူငယ်များကို အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်း ခိုင်းခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သော လှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဖောက်မှုဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ ထောင်ဒဏ်(၈)နှစ် ချမှတ်ခြင်းခံခဲရ့သည်။ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၁တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိသဖြင့် မတရားဖမ်းဆီးခံရာမှ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မစုစုနွေး ထောင်ကလွတ်လာပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာ ကျွန်ုပ်တို့ သူမနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး စကားပြောခဲ့သည်။
အမေး။ ။ မစုစုနွေး နေကောင်းပါသလား။ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ကျန်းမာရေုးအခြေအနေကိုသိပါရစေ။
Posted by dhamma at 8:13 AM0comments
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားမှုနှင့် စာကြည့်တိုက် (ဟောပြောပွဲ)
ဟောပြောပွဲအသံဖိုင် http://www.mediafire.com/?el1cc67qbb99bq0 နေရာ (SYCB)
Posted by dhamma at 9:47 AM0comments
2012 Best Friend Calendar now available
We have just added some interesting and useful new fundraising items to our Online Shop. Please takealook at our new calendars, Peace Bags, and book!
The coming of every new year is accompanied by idioms and sayings about new beginnings, positive change, and starting over withafresh face. And inanew project, The Best Friend hopes to inspireareminder of these promises and hopes – both in individual’s lives and in Burma.
The Best Friend is now selling its own 2012 fundraising desktop calendar, featuringacollection of portraits that capture the diversity and reflect the optimism and resilience of the people of Burma.
The calendar features beautiful photography from seven photographers, ranging from professionals to ‘lucky beginners’. The photographs come from four areas of Thailand and three areas of Burma, while the people in the images are primarily migrants and refugees from Burma and the Shan, Karen, and Mon States.
The collected 18 photographs, carefully selected from hundreds taken and contributed over the course of 2011, depict an initially unintentional theme. While sorting through the photos, Best Friend staff noticedapattern emerging with the photographs they found most poignant and powerful: they were all portraits. The assembled images depict primarily close-up shots of individuals and their expressive faces: young cheeks smeared with thanaka powder, eyes wrinkled with wisdom, smiles curved into sincere and serene smiles.
One featured photographer, Martin Sercombe, was eager to share his work with The Best Friend, contributing many of the photos seen in the calendar. Sercombe is the founding director of Media Projects East (www.mediaprojectseast.co.uk),aUK-based production company that initiates educational and community projects in Asia onawide range of social issues.
Posted by dhamma at 9:28 AM0comments
Posted by dhamma at 9:09 AM0comments
မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက်ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော ဘ၀စာစီစာကုံး ဘယ်လိုသီကုံးကြမလဲ တရားတော် အပိုင်း (၂) http://www.mediafire.com/?bxtoy4dp58sw4xf
Posted by dhamma at 10:06 PM0comments
Banned by the Maha Nayaka Sangha Council
On 20 November 2011, the well-known Burmese monk U Zawana was banned by the Maha Nayaka Sangha Council from giving Dhamma talks for one year.
The venerable U Zawana had givenaDharma talk in Kyine Tone City without prior permission from the authorities and the Maha Nayaka Council.
Although the Maha Nayaka Sangha Council is headed by senior monks (most are between 60 and 80 years old), it is controlled by the government’s Ministry of Religion. All members of this council are chosen by the military regime.
With the Sangha Council, the military regime attempts to control all religious activities of Buddhist monks throughout the whole country with one State Central Working Committee of Sangha, one State Sangha Mahanayaka Committee, 49 State Division Sangha Nayaka Committees, 500 Township Sangha Nayaka Committees, and 5763 Ward Sangha Nayaka Committees.
Since the installation of these regime-controlled Sangha Councils, monasteries have been closed and unity among members of the Sangha has been diminished.
Ifamonk does not abide by the orders from the Maha Nayaka Sangha Council, he can be sent to jail. Criticism of the Maha Nayaka Council can even lead to the authorities closingamonastery.
When, after the 2007 Saffron Revolution, the military started closing monasteries throughout the whole country, the Maha Nayaka Council did not protect the monasteries. On the contrary, the Maha Nayaka Council executed direct orders from the military regime.
Justafew days ago, Abbot U Thumingala, 44, was summoned by Maha Nayaka Sangha Council and receivedawarning after holdingapublic event and givingatalk without prior permission from the authorities and the Township Sangha Maha Nayaka Committee.
In September, the abbot, who is known for his talks on developing good moral character, heldapublic meeting with charity groups to exchange experiences.
Abbot U Thumingala had invited delegates of different charity groups from across the country to attend the meeting. 2,500 charity workers including monks and people who do charity work in 10 states and regions, as well as interested observers, attended the meeting. U Thumingala was already banned from giving religious talks in 2008 and 2009.
In February 2010, U Panyarthiha, 48, was banned from giving Dhamma talks for one year. U Panyarthiha is known to beavery brave monk. He organized help for the victims of Cyclone Nargis. When the military regime closed the areas that where hit by the cyclone and kept the donated money for themselves, U Panyarthiha gave Dhamma talks about this situation and criticized it openly.
He is also known to talk about General Aung San, which is rare in his country, and about freedom. During visits to Thailand and Japan, for example, he spoke openly about the real situation in his country. He supports poor people with the money people donate to him, he helps to provide education, and has openedamedical center that provides eye surgery for poor people.
Monks like U Panyarthiha, U Thumingala, and U Zawana, who do active social work are easily seen as adversaries of the military regime and the Maha Nayaka Sangha Council.
The reason for this might be that poor people who are uneducated and in difficult life circumstances can be controlled easily by the regime. Those monks who help or support people, are very respected by the lay people. This isathreat to the regime because suchamonk hasagreat influence.
Posted by dhamma at 9:44 AM0comments
သန်းကြွယ်သူဌေးဆို၍ ဘယ်လို လူစားမျိုးပါလိမ့်ဟူ၍ တအံ့တဩမတွေး ထင်လိုက်ကြပါနှင့်။ သန်းကြွယ်သူဌေးများ သည်လည်း ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ သာမန်လူထဲက လူများသာဖြစ်ကြပါ၏။ သို့သော် သူတို့သည် လူတိုင်းလိုသာမန် လူစားမျိုးဖြစ်ကြပါလျှင် သူတို့တစ်တွေ ကျတော့ ဘာ့ကြောင့် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်ကြပါသနည်း။ လူများစုကြီးကတော့ ဘာ့ကြောင့် လူလတ်တန်းစားဘဝမှ မတက်ကြ ပါသနည်းဆိုသည့် အချက်ကမူ လွန်စွာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းလှ ပါသည်။ သာမန်လူစားများပိုင်ဆိုင်သော အရည်အချင်းများဖြင့်ပင် သူတို့ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်းပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသြွာကယ်ဝ လာအောင် မည်သို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြသည်ကို လေ့လာသူနှစ်ဦးက ဆန်းစစ် ရှာဖွေခဲ့ကြပါ၏။ သူတို့၏ လေ့လာနည်း မှာ ထိပ်တန်းရောက် သန်ြးွကယ်သူဌေး များကို တွေ့ဆုံမေးမြန်း၍ ဖြေကြားရန် မေးခွန်းကလေးများ ပို့ပေးခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ အောင်မြင်မှု သရဖူဆောင်းထား သော သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးများ၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံမှာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် အောင်မြင်နေ သူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိ ရသည်။ သူတို့လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းများ ကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလှသည် တော့မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ သံဂဟေဆော် လုပ်ငန်း၊ အဝတ်လျော်ဖွပ်သန့်စင်ရေး လုပ်ငန်းမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ တခြားသော သန်ြးွကယ်သူဌေးအများစုသည်လည်း ဘဏ်နှင့် ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့များမှ ငွေချေးလုပ်ကိုင်သူများ မဟုတ်ကြပါ။ သန်ြးွကယ်သူဌေးဆယ်ဦးတွင် ရှစ်ဦးမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ဥစ္စာဓနတိုးပွား အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ငွေကြေးသုံးစွဲရာတွင် ဖြစ်စေ၊ နေထိုင်စားသောက်ရာတွင်ဖြစ်စေ မျှတရုံမျှသာ သုံးစွဲစားသောက်ကြသူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ အသားတင်ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၇ သန်းလောက်သာရှိကြသော် လည်း ရိုးရိုးသာမန်အဆင့်မျိုး၌သာ နေထိုင်ကြသည်။ ဟိတ်တစ်လုံးဟန် တစ်လုံးဖြင့် ပပလွှားလွှား၊ ကြွားကြွားဝါ၀ါ မနေကြပါ။ သူတို့နှင့်အတူ သွားလာ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းလျက်ရှိကြသော သူတို့၏ မိတ်ဆွေများပင် သူတို့မည်မျှထိ ချမ်းသာသည်ဆိုတာကို ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါ။ အမေရိကန်သန်ြးွကယ်သူဌေးများ အနေဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာအောင် နည်း မျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ သူတို့၏ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုကို လေ့လာခြင်းဖြင့် လူတစ်ဦးကြီးပွားချမ်းသာဖို့အတွက် ချမ်းသာသော မျိုးရိုးမိဘများမှ ပေါက်ဖွား လာရန် မလိုသလို ဘွဲ့ဒီဂရီတွေ၊ ရာထူး ရာခံအဆင့်အတန်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ဖို့လည်း မလိုအပ်လှကြောင်း ဖော်ပြလျက်ရှိနေ သည်။
Posted by dhamma at 7:26 PM0comments
မဲဆောက်မှာ ပထမဆုံး စာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်
မိုးမခအထောက်တော်၊ မဲဆောက်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁
ပြောင်းရွေ့မြန်မာအလုပ်သမားများ အများအပြားနေထိုင်သည့် ထိုင်နိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တွင် ပထမဆုံး မြန်မာ စာပေဟောပြောပွဲကို လာမည့် ဇန်န၀ါရီလ(၄)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူချစ်သော အထင်ကရ စာရေးဆရာများဖြစ်သည့် ဆရာ ချစ်ဦးညို၊ ဆရာ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)၊ ဆရာမ နုနုရည် (အင်းဝ) တို့ ကမဲဆောက်မြို့လယ်ရှိ ကျောင်းကြီးကျောင်းတိုက်ဝင်း မြက်ခင်းပြင်တွင် ညနေ ၄ နာရီမှ ည ၉ နာရီကျော်ထိ အားပါးတရ ဟောပြောကြမည်ဖြစ်သည်။
Posted by dhamma at 8:36 AM0comments
မေတ္တာရှင် ဆရာတော်အရှင်ဇ၀န တရားပွဲအပိတ်ခံရ (ဦးသိန်စိန်အစိုးရရဲ့ ဘာလဲဟဲ့ဒီမိုကရေစီ)
ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှ မေတ္တာရှင် ရွှေပြည်သာ ဆရာတော် ဦးဇ၀နအား ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်နယ် သာသနာရေး ဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူများက တရားဟောခွင့် တနှစ် ပိတ်ပင်လိုက်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့တွင် “အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကိုယ်သာ စောင့်ရှောက်ရာ” အမည်ဖြင့် နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့အထိ တရားပွဲ ကျင်းပနေပြီး နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် နေ့ညတွင် ဆရာတော် ဦးဇ၀န ဟောကြားရန်အလှည့် ဖြစ်သော်လည်း ဟောခွင့် မပေးခဲ့ဟု တာချီလိတ်မြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။
“တရား မဟောရဘူး။ တနှစ်တိတိ ပိတ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဆရာတော်ကတော့ ပြောသွား ပါတယ်။ ဒီနှစ်မဟောရလည်း နောက်နှစ်ပေ့ါတဲ့။ အဲဒါနဲ့ နေ့လည် နှစ်နာရီ လောက်မှာ ရန်ကုန်ကို လေယာဉ်နဲ့ ပြန်တက် သွားတယ်။”
ဆရာတော် ဦးဇ၀န ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အတွက် တရားမဟောနိုင်ကြောင်း အာဏာပိုင် များက ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ဆရာတော်မှာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး နေ့လည် (၁) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် တာချီလိတ်မြို့ ဗယ်လင်တိုင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ လာရောက် ဖူးမျော်သည့် ပရိတ်သတ် (၂၀၀) ကျော်အား တရားတိုလေး ဟောကြားပေးခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
တာချီလိတ်မြို့သို့ မလာမီ နိုဝင်ဘာလ(၂၀)နှင့် (၂၁) ရက်နေ့များက ကျိုင်းတုံမြို့တွင် တရား ဟောခဲ့ရာ နိုင်ငံရေးနှင့် ညှိစွန်းသည့် အကြောင်းအရာ တခုခုကို ထည့်သွင်းဟောမိသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပိတ်ပင် ခံရခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု တာချီလိတ် မြို့ခံများက ထင်ကြေးပေး ပြောဆိုနေ ကြသော်လည်း ဆရာတော် ဦးဇ၀န က တစုံတရာ မိန့်ကြားခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
Posted by dhamma at 9:20 AM0comments
Ashin Issariya: “This is not the time to criticize Daw Aung San Suu Kyi or her party, the NLD”
On 22 November 2011, Mizzima published an article titled “All Burma Monks Alliance opposes NLD decision to re-register”. The statement that this article is referring to was issued by students who have been working together with U Aubhatha (one of the founding members of the ABMA) in the past. They are using the logo of the original All Burma Monks Alliance, and issued this statement without consulting with Ashin Issariya (aka King Zero, co-founder of the ABMA).
Ashin Issariya (aka King Zero): “This isavery important time for our country. Aung San Suu Kyi choseanew direction. The situation in our country has been very difficult foralong time now. Since Daw Aung San Suu Kyi has been released from her house arrest she has been trying to work together with many different groups, and has tried to visit other parts of the country.
“As we know, the majority of Burma’s people are uneducated. They are living under fear and have no experience with political work. In addition, the military regime has sent most political leaders to jail, this includes many leaders of Daw Aung San Suu Kyi’s party, the NLD (National League for Democracy). They are in jail, and this has weakened the NLD.
Moreover, foreign countries did not really support her in the last several years. When she was arrested, for example, no one did anything more than talk. We have to be aware that even at this time it is possible that the military regime is searching for ways to re-arrest her.
Thein Sein said “we do not have political prisoners. We only have people who broke the law.”
It is not good that the president talks like this. If he really wants to change Burma toademocratic country, he has to address the real situation. I want to ask: How did the more than 200 monks, who are still in prison, break the law? They only walked peacefully in the streets, sending loving kindness.
- Ashin Issariya (aka King Zero)
For Daw Aung San Suu Kyi it means she has to findaway to stand with her party and to renew and develop her party. In suchatime we can not criticize Daw Aung San Suu Kyi or her party. It is clear that Daw Aung San Suu Kyi and her party members want to see all political prisoners released and are working for that.
A short while ago I called U Bah Shwe from the NLD to ask him because before I had only heard that the party would consider to re-register asaparty and later consider if it would be good to participate in the parliament. Now I hear they are re-registering and hoping to participate in the parliament at the same time. So I asked him why. He told me, the military regime is very cunning. “The regime told us, if you want to register, you have to take part in the parliament as well. If you don’t want to participate in the parliament we can not allow your party to re-register.”
Because of this, in this time the NLD can not choose another way right now. Leaders of other countries or the UN are only talking. Remember the Depayin Massacre in 2003, at that time the military regime sent their thugs to attack the people on the streets. Many people were killed. At that time the UN only issuedastatement. The same happened with the Saffron Revolution when we monks walked inanon-violent way on the streets. Until now, many monks are still in jail. They did not break any laws. This isaproblem. As we know, China and Russia always use their veto power [in the UN]. They are only seeing their economic interests.
It is similar with our Asian neighbors. This is very difficult for our country. Their actions are not good for the people of our country. They are guided by their economic interests, starting projects with our military leaders.
In the last meeting of Asean, Thein Sein said, “We do not have political prisoners. We only have people who broke the law.” It is not good that the president talks like this. If he really wants to change Burma toademocratic country, he has to address the real situation. I want to ask: How did the more than 200 monks, who are still in prison, break the law? They only walked peacefully in the streets, sending loving kindness.
As we know, in 2007 the military entered and destroyed monasteries violently. They brutalized and killed monks, sent them to the jails. We monks are living in monasteries and the military entered the monasteries at night when we were asleep. They beat and tortured us. In fact, they broke the law. The military regime broke the law, incarcerated innocent people, and yet they say the political prisoners broke the law. This is very confusing. They told these lie in the past, and now they are still telling this lie. How can we believe them?
For this reason I don’t want to criticize the NLD or Daw Aung San Suu Kyi now.
The students who wrote this statement and used the name of All Burma Monks Alliance (ABMA) never discussed with me about it, even though they know me. They shouldn’t do like that.”
Posted by dhamma at 10:47 AM0comments
စစ်သားတွေက ချိုင်းထောက် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတိုက်ဆောက်
unday, 20 November 2011 01:14 ဗိုလ်ရဲထက်
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ဒို့တပ်မတော်ကြီး ဒီနေ့ခေတ်အခါမှာ ဘယ်လို အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေလဲဆိုတာ မင်းတို့လည်း သိမှာပါ။
ငါတပ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လိုပဲ ဒို့ လက်အောက်ကနေ ဒို့တွေရဲ့ အမိန့်ကို နာခံနေကြတဲ့ငါတို့ တပ်မတော်ကြီးရဲ့ အဓိကအင်အားဖြစ်တဲ့ စစ်သားတွေဟာ ချိုင်းထောက်တွေနဲ့ဖြစ်နေကြပြီး လမ်းဘေးဝဲယာမှာ တောင်းရမ်းစားသောက်နေကြတဲ့ အခါမှာတော့ ဒို့တပ်မတော်ကြီးက ဗိုလ်ချုပ်တွေကော ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေက တိုက်ဆောက်နေကြတဲ့ အခြေအနေတွေကို မင်းတို့လည်းသိ ငါလည်းအသိ တတိုင်းတပြည်လုံးလဲအသိပဲဆိုတော့ မင်းတို့လည်း သိမှာပါပဲကွာ။
ဘယ်လောက်ထိ တောင်ဖြစ်နေလဲဆို မင်းတို့ငါတို့ မဟာသိပ္ပံသင်တန်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မှာကို ဗိုလ်ချုပ်ရွာဆိုတာကို အားလုံးကြားဖူး ကြမှာပါကွာ။ ဒါပေမယ့်ကွာ တပ်မတော်အတွက် နိုင်ငံအတွက် ပြည်သူအတွက် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ပေးဆပ်သွားကြသူတွေ ကတော့ ဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ ဖြစ်နေလဲဆိုတာ မင်းတို့ငါတို့ စာပေ(၂) ကိုအပြန်လမ်းရဲ့ လမ်းတနေရာကနေ တောင်းရမ်းစား သောက်နေရင်း ဒို့တတွေဖြတ်သွားတိုင်း ယနေ့အချိန်ထိ သူ့ရဲ့ အထက်အရာရှိများ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍ၊ တပ်မတော်ရဲ့ သားကောင်းတွေဆိုပြီး အသိအမှတ်ပြု လက်တင်အလေးပြုနေတဲ့ စစ်သားဟောင်းတွေကို မင်းတို့လည်း တွေ့ဖူးမယ်ဆိုတာကို ငါယုံကြည်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းရယ် ဒါက မင်းတို့ငါတို့ မြင်တွေ့နေတဲ့ သူတွေလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ငါတို့ မင်းတို့တွေ မတွေ့ရတဲ့ ဒို့ တတွေရဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် ညီနောင် စစ်သည်များဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တပ်ကနေ အငြိမ်းစားယူသွားတာပဲဖြစ် ဖြစ် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ပေးလှူလိုက်ရလိ်ု့ တပ်မတော်မှာ ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့မရတော့လို့ နားသွားရတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုများ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြမလဲဆိုတာ မင်းတို့ငါတို့ အရာရှိပီပီ ခေါင်းဆောင်ပီပီ ဘယ်နှစ်ခါများ စဉ်းစားမိခဲ့ကြ သလဲ။
ဒါပေမယ့် ငါတို့တွေကတော့ ငါတို့ဟာ မဟာသိပ္ပံပြီးရင်တော့ အနည်းဆုံး တပ်ရင်းမှူးလောက်တော့ မှန်းလို့ရပြီ၊ ကြိုးစားပြီး (ခိုင်းတာလုပ်၊ ကြွေးတာစား) နေသွားရင် အနည်းဆုံး မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် တိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူးလောက်တော့ မှန်းလို့ရပြီဆိုတဲ့ အနာဂတ်တွေနဲ့ ပျော်နေခဲ့ကြတယ်နော်။
အဲဒီအနာဂတ်တွေထဲမှာ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ကြမယ်၊ ပြည်သူကို ကူညီကြမယ်၊ အနာဂတ်နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးကဏ္ဍမှာ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုကြမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ ဒါကို နိုင်ငံရေးကဏ္ဍနဲ့ တခါမှ မတွေးခဲ့မိဘူး။
Posted by dhamma at 8:25 AM0comments
ဓမ္မစကား (ခေတ်လူများ၏မှတ်စု ဂျာနယ် အမှတ်စဉ် ၃ )
ယော သဟဿံ သဟေဿန၊ သင်္ဂါမေ မာနုသေ ဇိနေ။
ဧကဉ္စ ဇေယျမတ္တာနံ၊ သဝေ သင်္ဂါမဇုတ္တမော။
စစ်မြေပြင်၌ ရန်သူထောင်ပေါင်းများစွာကို အောင်နိုင်သော သူရဲကောင်းသည်ရှိ၏။ ထိုသူရဲကောင်း သည် အမြတ်ဆုံးသူရဲကောင်းမဟုတ်။ တစ်ယောက်တည်းသော မိမိကိုယ်ကိုမိမိက အောင်နိုင်သူသည် သာလျှင် အမြတ်ဆုံးသူရဲကောင်းဖြစ်၏။
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့သော ဤဓမ္မပဒဂါထာတော်ကို သေချာစွာနားလည်ဖို့လိုပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရန်သူထောင်သောင်းပေါင်းများစွာကို အောင်နိုင်ခြင်းသည် တကယ့်အောင်နိုင်ခြင်း မဟုတ်ပေဘူး။ မိမိကိုယ်ကို အောင်နိုင်မှသာလျှင် တကယ့်အောင်နိုင်တဲ့သူ၊ အမြတ်ဆုံးလူလို့ ဆိုထားပါ တယ်။ အပြင်မှာတိုက်တဲ့စစ်ပွဲနဲ့ မိမိရင်တွင်း အဇ္ဈတ္တတိုက်ပွဲကို နှိုင်းယှဉ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လောကမှာ လူအများတိုက်နေကြသည်မှာ အပြင်တိုက်ပွဲတွေသာများကြပါသည်။ ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းအဇ္ဈတ္တတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့မေ့နေကြပါသည်။ စာရေးသူတို့နိုင်ငံမှာပဲကြည့်လျှင် သိနိုင်ပါသည်။ ဦးနေဝင်းသည် အပြင်တိုက်ပွဲ အရ စစ်ပွဲတွေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် သူ့ရင်ထဲက အဓမ္မတရားကိုကား နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် နိုင်ငံ တော်ရဲ့ တကယ့်အာဇာနည်သူရဲကောင်းဖြစ်ရမည့်အစား တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ့်တရားခံ စစ်အာဏာရှင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ တနိုင်ငံလုံးကို ဒုက္ခတွေပေးခဲ့ပါသည်။ ဒါကြောင့် တနိုင်ငံလုံးရဲ့ အမုန်းကိုခံရကာ သေတော့ ခွေးသေ၊ဝက်သေ လူမသိသူမသိ ပုန်းလျှိုး ခွက်ဆိုးနဲ့သေခဲ့ရပါသည်။ ဒါဟာ သူ့ရင်ထဲက အနိုင်တိုက်ရမည့် အဓမ္မကို မနိုင်လို့ဘဲဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ သူ့ရင်ထဲက အဓမ္မတရားတွေကို နိုင်အောင် တိုက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် သူ့ကို တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ချစ်ခင်ကြသည်။ တိုင်းပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေး ဖခင်အဖြစ်အသိအမှတ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ထက်ထိ ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ချစ်ခင်မှုအပြည့်ရှိနေကြသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဗုဒ္ဓဘုရားပြောခဲ့သည့် ဓမ္မစကားအတိုင်း အတွင်းအဓမ္မတရားကို နိုင်အောင်တိုက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုသည် မိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲကအဓမ္မတရားများကို အနိုင်တိုက်ကာ တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် ကြိုးစားကြ မည်ဆိုလျှင် ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ ပြန်လည်ဦးမော့လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်းကို ဓမ္မစကား လက်ဆောင်ပါးရင်း . . . .
Posted by dhamma at 6:58 AM0comments
အရှင်ဂမ္ဘီရ ကျန်းမာရေးကြောင့် မိသားစုနှင့် ပြန်နေရန်လိုဟုဆို
သဲသဲ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၈ မိနစ်
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ ကလေးမြို့ အကျဉ်းထောင်မှ မြောင်းမြထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံရသည့် ဆရာတော် ဦးဂမ္ဘီရ၏ စိတ်ကျန်းမာရေး အခြေအနေ စိုးရိမ်ရသဖြင့် မိသားစုနှင့် အတူတကွ ပြန်လည်နေထိုင်ရန် လိုအပ်
ကြောင်း ထောင်ဆရာဝန်က အကြံပြုသည်ဟု ဆရာတော်၏ အမဖြစ်သူက ပြောသည်။
ထောင်တွင်း ဆက်လက်ထားရှိပါက မူလစိတ် အခြေအနေပြန်ရောက်ရန် မလွယ်ကူဟု ထောင်ဆရာဝန် ပြော
ကြောင်း တနင်္လာနေ့က ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ခဲ့သည့် ဦးဂမ္ဘီရ၏ အမဖြစ်သူ မခင်သူဌေးက ပြောသည်။။
Posted by dhamma at 6:21 AM0comments
ကြံ့ဖွံ့အမတ် ဦးခင်ရွှေရတဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ အတုဖြစ်နေ (လူလိမ်ကြီးများအဖွဲ့)
Wednesday, 23 November 2011 22:14 ဂျက်ဖရီ ဆန်းမောင်
Posted by dhamma at 6:10 AM0comments
Posted by dhamma at 8:19 AM0comments
Chiang Mai (Mizzima) – The Sangha Maha Nayaka Committee has told Hmawbi Mingalar Monastery Abbot U Thumingala to report on Wednesday to receiveawarning for holdingapublic event and givingatalk without prior permission.
In September, the abbot, who is known for his talks on developingagood moral character, heldapublic meeting for charity groups to exchange experiences. Abbot U Thumingala invited delegates of charity groups from across the country to attend the meeting. A total of 2,500 charity workers including monks and people who do charity work in 10 states and regions, and interested observers, attended the meeting, according to the abbot’s webpage.
Posted by dhamma at 7:34 AM0comments
ရာဇဝင်မှာ ကိုအောင်ဆန်းဆိုတဲ့ အမည်နာမကို
Posted by dhamma at 6:36 AM0comments
91st National Day Celebration held by former political prisoners (20-11-2011)
Posted by dhamma at 8:02 AM0comments
မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက် သင်တန်းများ မဲဆောက်မြို့
Posted by dhamma at 9:17 AM0comments
Posted by dhamma at 8:57 AM0comments
မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက် မဲဆောက်မြို့ သုံးလတစ်ကြိမ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ထိုင်းဘာသာ၊ကွန်ပြူတာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ
Posted by dhamma at 8:42 AM0comments
Posted by dhamma at 7:41 AM0comments
Posted by dhamma at 7:24 AM0comments
Posted by dhamma at 6:23 AM0comments
Posted by dhamma at 5:57 AM0comments
Ma Su Su Nway (40): “We are struggling for human r...
မေတ္တာရှင် ဆရာတော်အရှင်ဇ၀န တရားပွဲအပိတ်ခံရ (ဦးသိန်...
Ashin Issariya: “This is not the time to criticize...
အရှင်ဂမ္ဘီရ ကျန်းမာရေးကြောင့် မိသားစုနှင့် ပြန်နေရန...
ကြံ့ဖွံ့အမတ် ဦးခင်ရွှေရတဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ အတုဖြစ်နေ (လ...
91st National Day Celebration held by former polit...
မိတ်ဆွေကောင်းစာကြည့်တိုက် မဲဆောက်မြို့ သုံးလတစ်ကြိ...
စွန့်လွှတ် စွန့်စားရမယ့် စိန်ခေါ်မှုဆီသို့ ဦးဝင်းတင...
Ashin Gambira transferred to yet another remote pr...
Mandalay Peace Protest – Sangha under pressure
We call on all monks, people of Burma and people o...
Mandalay Peace Protest –
Monks demand freedom in Burma
မန္တလေးမြို့ ဘုရားကြီးမှာ သံဃာတော်တွေ ဆန္ဒပြ
ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ၏ သိမ်ထပ်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား
NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးအပေါ် ဦးဝင်းတင်အမြင်
အရှင်ဂမ္ဘီရ ကျန်းမာရေး ကောင်းလာပေမဲ့ သွားနာတဲ့ ဝေဒန...
ထောင်ကျ ဆရာတော် ဦးခေမိန္ဒ(ဦးကေလာသ)ကျန်းမာရေး စိုး...
Food donation on the rubbish dump
မရှင်းရင် မရတော့လို့ ရှင်းပြလိုက်ပါတယ် (၇)
သရဏဂုံ သုံးပါး၏ အရေးပါပုံအကြောင်း
မြန်မာ ၇ ဦးကို တရုတ်စက်ရုံမှာ လှောင်ပိတ် ခိုင်းစေ
ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များအတွက် သိမ်ထပ်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ...
ဂဒါဖီ သံဝေဂ သန်းရွှေရဖို့
ဆရာကြီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်
မြောက်ဖက် စီးလာတဲ့ရေတွေ မြို့တော်ဗဟိုကို ဆက်လက်စီး...
Free All Political Prisoners နိုင်ငံအကျဉ်းသားများအ...
မြန်မာ့အရေး ရင်လေးစရာ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဗျို့
လူမိုက် ၊ လူတော် ၊ ပညာရှိ အယူအဆများ
ဦးဂမ္ဘီရ စိတ်ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ကြောင်း မိခင်ပြော